Raspberry Pi – NaingLinHan
Raspberry PI Passwordless Access with SSH key — December 24, 2016
Raspberry PI Passwordless Access with SSH key
December 24, 2016 December 24, 2016 /nainglinhan/Leaveacomment
ကျွန်တော်တို့ Raspberry Pi ကို Headless Mode သံုးဖို့ ssh ကနေဝင်တဲ့ အခါ.. IP ခေါ်လိုက် Password ရိုက်လိုက်နဲ့ အလုပ်ရူပ်ပါတယ်… ဒီနေ့တော့ ဒီအဆင့်တွေကို ကျော်လိုက်ရအောင်…
ပထမဆံုး ကွန်ပျူတာကနေ ssh key generate လုပ်ရပါမယ်… key generate လုပ်ဖို့အတွက် အောက်က command ကိုရိုက်ပါ…
Control Raspberry Pi Via Headless Mode [LAN] [Ubuntu] — December 2, 2016
Control Raspberry Pi Via Headless Mode [LAN] [Ubuntu]
December 2, 2016 /nainglinhan/Leaveacomment
Raspberry Pi ကို စပြီး လေ့လာသူတွေ အဖြစ်များတဲ့ ပြဿနာက RPI နဲ့ ချိတ်ပြီး သံုးဖို့ Display မရှိတာပါ။ အိမ်က TV နဲ့ သံုးဖို့ကျလဲ အချိန်တိုင်း အဆင်မပြေနိုင်ဘူးလေ.. အိမ်သားတွေ ကိုရီးယားကား ကြည့်နေတဲ့အချိန် TV သွားလုလို့မှမရတာ… အော်ထုတ်ခံရမှာပေါ့ .. 😛 ဒါတွေအဆင်ပြေအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?? အိမ်က TV ကို သံုးမရအောင် Antenna ကြိုးတွေ သွားဖြုတ်ထားမလား?? နောက်တာပါ.. TV လုဖို့ ကိစ္စကို မေ့လိုက်ပါတော့ 😛 ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်Desktop, Laptop ကနေပဲ RPI ကို Headless Mode နဲ့ သံုးလို့ရပါတယ်။ Continue reading →
Creating A Media Center (OSMC) with Raspberry Pi — November 26, 2016
Creating A Media Center (OSMC) with Raspberry Pi
November 26, 2016 /nainglinhan/Leaveacomment
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အချစ်တော် raspberry pi လေးကို အသုံးပြုပြီး အိမ်မှာ ကိုယ်ပိုင် media center လေး ဖန်တီးပြီး အပန်းဖြေလိုက်ရအောင်… ဒီတစ်ခေါက်တော့ OSMC (Open Source Media Center) ကို အသုံးပြုပြီး Media Center တစ်ခု ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတာ ပြောပြသွားပါမယ်။ OSMC လိုပဲ တခြား Xbian တို့ OpenElec တို့ရှိပါသေးတယ် နောက်ကြုံရင်ရေးသွားပါဦးမယ်။ Continue reading →
Raspberry Pi အတွက် Operation System Install လုပ်မယ်… — November 10, 2016
Raspberry Pi အတွက် Operation System Install လုပ်မယ်…
November 10, 2016 November 11, 2016 /nainglinhan/Leaveacomment
ကျွန်တော် ဒီနေ့ Raspberry Pi အတွက် သူ့ရဲ့ official OS ဖြစ်တဲ့ Raspbian OS တင်နည်းလေးရေးပါမယ်။ Raspbian မှာ wheezy နဲ့ Jessi ဆို ပြီး နှစ်မျိူးရှိပါတယ်။ wheezy က အရင်ထွက်ထားတာဖြစ်ပြီး Jessi ကနောက်ထွက်ပါ။ UI ပိုင်းမှာ သိသိသာသာ မကွဲပေမယ့် တခြား ကွဲပြားတာတွေရှိပါတယ်။ Installation ပိုင်းကို ပြောမှာဖြစ်တဲ့ အတွက် ဒီအပိုင်းတွေ အကျယ်မပြောတော့ပါဘူး။ Raspbian ကို install လုပ်နည်း နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ပထမ တစ်နည်းက Noob နဲ့တင်တဲ့နည်းပါ။ Noob OS ကို Download ဆွဲ ရလာတဲ့ zip file ကို ဖြည်ပြီး sdcard ထဲ ကူးထည့်လိုက်ရုံပါပဲ။ အရမ်းလွယ်တဲ့ အတွက် မပြောတော့ပါဘူး။ နောက်တစ်နည်းက Raspbian OS image file ကို တိုက်ရိုက် sdcard ပေါ် တင်မယ့်နည်းပါ။ ဒီနည်းကိုပဲပြောသွားပါမယ်။